व्यापारसँग जोडिएको नयाँ किस्सा: काला प्रेमी, कालै व्यापार ! - inaruwaonline.com
व्यापारसँग जोडिएको नयाँ किस्सा: काला प्रेमी, कालै व्यापार !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०९, २०७४ समय: १०:३४:२५
काठमाडौं, ९ माघ । कालो व्यापारसँग जोडिएको नयाँ किस्सा हो काला वर्णका प्रेमी । थाइल्याण्डकी युवती खुनजई खनरात यस्ती कोकिन व्यापारी हुन् जसले हरेक देशमा काला प्रेमी तयार पार्छिन् ।नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्र व्यूरोले दिउँसो २ किलो कोकिनसहित खुनजई र उनका प्रेमीलाई पक्राउ गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो । २८ वर्षीया खुनजई बोलिभियाली युवक फ्रेडी ममनी एण्डियाका साथ नेपालमा पक्राउ परेकी हुन् । एण्डिया खुनजईका नयाँ प्रेमी हुन् ।
अध्ययन छाडेर थाइल्याण्डमा काम गर्न थालेकी खुनजई प्रेमी बनाउन माहिर छिन् । उनी कालो जातीका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रेमी बनाउँदैन थिइन् । ‘मलाई कालो जाति जति अर्को जातका मानिस मन पर्दैन, मेरो सौख नै कालो जातका युवकसँग प्रेम गर्नु हो’ खुनजईले नेपाल प्रहरीमा बयान दिएकी छन् ।
कालो जातीकै प्रेमी बनाउन उनी थाइल्याण्डबाट विभिन्न देशको यात्रा गर्ने गरेको लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरोका प्रमुख डिआइजी ठूले राईले बताए । प्रेमीकै खोजी गर्ने क्रममा उनको नेपालका एक युवकसँग प्रेम बस्यो । अर्का प्रेमी उनका थाइल्याण्डमा छँदै थिए । थाइल्याण्डका प्रेमीले नेपाल घुम्न जाने व्यवस्था मिलाई दिए । खुनजईलाई ढुंगो खोज्दा देवता मिलेजस्तो भयो ।
प्रेमी नेपालमै फ्रीमा घुम्न पाइने भयो । प्लेन टिकट खुनजईले काट्नु परेन । प्लेन टिकदेखि नेपालको होटलसम्मको व्यवस्था थाइल्याण्डकै प्रेमीले गरिदिए । र नेपालका उनका प्रेमीले मरोतर्फबाट एक महत्वपूर्ण उपहार भन्दै खुनजईका थाइल्याण्डका प्रेमी नेपालका प्रेमीलाई उपहार पठाए ।
कालो सुटकेश नेपालका प्रेमीका लागि उपहार थियो । त्यसमा के थियो खुनजई अनभिज्ञ थिइन् । उनी ब्राजिल र इथियोपिया र भारत हुँदै नेपाल आइन् । उनी प्रेमी भेट्न ठमेलस्थित एक होटलमा २८ वर्षका बोलिभियाका युवक फे्रडी ममनी एण्डियाका साथ पक्राउ परेकी हुन् ।
‘नेपालमा मेरो एकजना ब्वाईफ्रेड छ । उसैलाई भेट्न र सामान दिन आएको थिए’ उनको बयानलाई उदृत गर्दै डिआइजी राईले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सुटकेसमा के थियो मलाई थाहा थिएन ।’ नीहरूले नेपाललाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरेर कोकिन सप्लाई गर्न लागेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।